Soomaali labo maamul kala leh balse masaaliixdooda u midoobay - BBC News Somali
Soomaali labo maamul kala leh balse masaaliixdooda u midoobay
25 Febraayo 2019
Dadka ku nool magaalada Gaalkacayo oo colaado sokeeyo ay soo mareen sannad ka hor ayaa hadda ku midoobay masaaliixdooda caamka ah.
Magaaladan oo labo maamul ay ka kala arrimiyaan ayaa xasiloonayd muddooyinkii dambe, markii ay nabaddii taabagashayna waxay hadda iska kaashanayaan sidii bilicda magaalada iyo kaabeyaasha dhaqaalaha loo hagaajin alahaa.
"Mashaariicda socota waxaa ka mid ah laamiga dheer, waxaa ka mid ah hagaajinta suuqa xero dayax, diyaarinta barxadaha magaalada, wax badan ayaana u qabsoomay labada dhinac ee magaalada, arrintaasina waxaa sabab u ah nabadda" ayuu yiri duqa magaalada Gaalkacayo ee dhanka Puntland oo BBC-da la hadlay.
Dadaalkan dib u dhiska iyo hagaajinta bilicda magaalada waxaa gacan ka gaysanaya shacabka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay.
Dilka Xaamid Wardheere oo ruxay Gaalkacayo
Gabadh Soomaali ah oo dhiig bax u dhimatay kadib markii la guday
Faysal Baabaraqiis oo maxad ka ah shirkadda gacanta ku haysta dhismaha waddada halbawlaha u ah magaalada Gaalkacayo ayaa BBC-da u sheegay in aysan lacagta oo dhamaystiran ku xidhin dhismaha waddada ayna billaabeen markii wax uun dhaqaale ah la helay.
"Shirkadda ayaa kabtay dhaqaalihii dhimanaa, ujeedaduna waa in ay qurxiso magaalada iyadoon shuruud ku xirin, waxaa khasab nagu ah in aan sii wadno oo hawshan oo kambinigu uu caawiyo Soomaaliya oo dhan." Ayuu yiri Faysal.
Mashaariicda horumarineed ee ka socda magaalada gaalkacayo waxaa ku diirsaday qaar badan oo ka mid ah shacabka magalaada sida ay BBC-da u sheegeen.
Fu'aad Yaasiin oo reer Gaalkacayo ah oo fiirinaya waddo laga wado magaalada ayaa BBC-da u sheegay in ay isaga la tahay in tayada waddadaas oo kale aan laga heli karin, Muqdisho iyo Hargeysa.
Xigashada Sawirka, Saciid Nadaara
"Jidku wuxuu isku xira dalka, waa hagaajiyaha socodka, waa sahlaha ganacsiga iyo horumarka, qof kastana masaaliixdiisa ayaa ku jirata, mid gaari leh iyo gaari raacaba, marka haddaan nahay odayadii iyo culimadii waxaan u aragnaa wax wayn oo soo kordhay loona baahanyahay." Ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo BBC-da la hadlay.
Marka laga soo tago isxilqaanka dadka Shacabka ah labada maamul ayaa iska kaashada sidii nolosha shacabka loo hagaajin lahaa sida uu sheegay Xirsi Yuusub Barre oo ah duqa magaalada Gaalkacayo ee qaybta GalMudug.
"Waxaan dhisi doonaa waddooyin isku xira labada dhinacba oo ay ka wada faa'iidaysanayaan reer Gaalkacayo, meel suuq ah iyo saldhig" Ayuu yiri Xirsi.
"Waxaa jira mashaariic aan si wada jir ah hay'ado uga codsanay oo nalaga aqbalay, waxaana ka mid ah saddex waddo oo laami ah oo labada dhinac isaga kala gudbaya." ayuu intaas ku sii daray.
Maxay beeralleyda jaadka Kenya ka dhaheen dib u doorashada Xasan Sheekh Maxamuud?
Arrimaha horyaalla Xasan Sheekh, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
TOOS Abiy Axmed oo farriin u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
4 qodob oo uu ballan qaaday Xasan Sheekh ka hor inta aan la dooran
Aabbaheed oo xabsi la dhigay dartii ayay u baratay cilmiga sharciga
Lama-filaannada iyo cashirrada laga bartay doorashadii madaxweynaha